Showing १३१-१४० of २,८३८ items.
उर्लाबारीको क्यारेनटाइनमा बसेका २७ जनालाई विदाइ गरियो
मदनबाबु प्रसाई उर्लाबारी / उर्लाबारी नगरपालिकाले क्यारेनटाइनमा वसेकाहरुको स्वाब संकलन गरेको स्वाबको पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट नगेटिभ आए पछि सबैलाई घिर पठाइएको छ । नगरपालिकाले राधिका माध्यमिक विद्यालय उर्लाबारी–६ मा व्यवस्थापन गरेको क्वारेनटाइनमा भारत सहित अन्य स्थानबाट आएका २७ जना नागरिकहरु विगत १४ दिनदेखि बस्दै आएका थिए । नगरको क्वारेनटाइन समितिका संयोजक एवं नगर उप—प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीको अध्यक्षतामा बुधबार नगर प्रमुख खड्ग फागोले उनीहरुको विदाई गरेकाथिए । नगरपालिले क्वारेनटाइनमा बसेका २७ जनासहित फ्रन्टलाइनमा रहेका कार्य समपादन गर्नुहुने जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, स
क्वारेन्टाइनमा रहेका ६ जनाको स्वाव संकलन
दिनेश सुब्बा पथरी / कानेपोखरी गाउँपालिकाको वयरवन स्वास्थ चौकी र जनसेवा माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको ६ जनाको स्वाव संकलन गरिएको छ । बुधबार जनसेवा माविको खेल मैदानमा उनिहरुको स्वाव संकलन गरेको हो । उनिहरु १४ दिन अघि भारतबाट घर फर्किने क्रममा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । वयरवन स्वास्थ चौकीको क्वारेन्टाइनबाट ४ जना र जनसेवा माविको क्वारेन्टाइनबाट २ जना गरी जम्मा ६ जनाको स्वव संकलन गरिएको स्वास्थ संयोजक रोहिन्द्र कुमार राजभण्डारीले बताए । उनीहरुको एकहप्ता अघि आरडिटि टेष्ट गरिएको थियो । आरडिटि टेष्टमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । संकलन गरिएको स्वाव बुधबार नै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा
विराटनगरमा स्वास्थ्यकेन्द्र स्थापना
विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं. १६ दरैयास्थित स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको छ । भारतको सिमा जोडिएको वडामा महानगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको हो । स्थानियमा स्वास्थ्य सेवाको पँहुच बढाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिए । स्वास्थ्यचौकीको बुधवार एक अनौपचारिक कार्यक्रमका वीच विराटनगर महानगरका प्रमुख पराजुलीले उद्घाटन गरेका छन् । नगरका हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ महानगरले काम गरिरहेको उनले बताए । कोरोनाका कारण सामान्य जाँच गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको अबस्थालाई मध्यनजर गर
प्रकाशित मितिः जेठ २१, २०७७
प्रेस युनियन र नोबेल अस्पतालबीच सम्झौता, उपचारमा पत्रकारलाई ५० प्रतिशत छुट
धरान । सुनसरीका पत्रकारहरूले नोबेल अस्पतालमा उपचार गराएमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले अस्पतालसँग सहकार्य गरेपछि सुनसरीका पत्रकारहरूलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । नोबेल अस्पतालसँग बुधबार सम्झौता गरिएको प्रेस युनियन सुनसरीका सभापति पवन अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा कार्यरत सबै मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकारहरूले यो सविधा पाउने भएका हुन् । केही दिनअघि मात्रै युनियनले २६० जना पत्रकारहरूको कोरोना बिमा गरिदिएको छ । कोरोना संक्रमित हुने बित्तिकै पत्रकारहरूले एक लाख रुपैयाँ बिमा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसक्रममा सभापति अधिकारीले नोबेल अस
नेपालमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, बुधबार थपिए २०१ संक्रमित
धरान । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एक जनाको ज्यान गएको छ । काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत दोलखाका ७६ वर्षीय वृद्धको बुधबार ज्यान गएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार सुरुमा सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई कोरोना देखिएपछि त्रिविमा पठाइएको थियो । उनको उपचारको क्रममा निधन भएपश्चात् सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । नेपालमा बुधबार मात्रै २०१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । नेपालमा कुल संख्या २३ सय पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार धनकुटामा एक जना को
भारतबाट आएका सुनसरीका ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ
भण्टाबारी । दुई हप्ताअघि भारतबाट आएका सुनसरीका सातजना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपाल मुस्लिम संघ प्रदेश नम्बर १ का सभापति हाजी इस्राइल मन्सुरीका अनुसार भारतको गुजरातबाट आएका उनीहरूमा पीसीआर टेस्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ पाइएको हो । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका ८ को जामिया जियाउल उलुम मदरसाको क्वारेन्टाइनमा रहेका ५३ जनामध्ये पीसीआर टेस्ट गर्दा सातजना संक्रमित पाइएकाे हाे । कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका २ का एक पुरुष, वार्ड नम्बर ४ का चार पुरुष, वार्ड नम्बर ५ र वार्ड ८ का एक-एक पुरुष गरी सात जनामा कोरोना देखिएकाे हाे । पाँच दिनअगाडि कोशी अस्पताल विराटनगरबाट आएका स्वा
डडेल्धुराको क्वारेन्टिनमा रहेकी एक महिलाको मृत्यु
धरान । कर्णाली प्रदेशको डडेल्धुराको क्वारेन्टिनमा रहेकी एक ३० वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । भारतबाट जेठ १८ गते नेपाल आइपुगेकी उनी मंगलबार राति १०ः०० बजेतिर डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ असिग्राम आधारभूत विद्यालय रौनाकोटको क्वारेन्टिनमा बसेकी थिइन् । उनी नयाँ दिल्लीबाट जेठ १८ गते गौरीफण्टा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकी थिइन् । साँझको खाना खाइसकेपछि सामान्य अवस्थामा रहेकी ती महिला शौचालयमा जाँदा एक्कासी बेहोस बन्दै मुखबाट रगत आएको उनको श्रीमान्को भनाइ उदृत गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला ठगुन्नाले जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकी उनी के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने विषय
आइपासले दियो बीपी र धरान उपमहानगरलाई साढे १४ लाखको स्वास्थ्य सामग्री
धरान । सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा कार्यरत आइपास नेपालले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखालाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच संस्थाले प्रतिष्ठान प्रशुति रोग विभागका प्रमुख डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र धरान उपमहानगरकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई स्वास्थय सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । संस्थाले धरानका दुई वटा संस्थालाई १४ लाख ४५ हजार ३८५ रुपैयाँ बराबरको सामग्री प्रदान गरेको आइपास नेपालका प्रदेश १ संयोजक केदार भण्डारीले जानकारी दिए । आइपासले प्रदेश १ को ६ जिल्लामा सुरक्षित मातृत्वका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । संस्था
झापाका क्वारेन्टाइनमा बसेका ५ जनामा कोरोना
भद्रपुर / झापाका क्वारेन्टाइनमा बसेका थप पाँच जनामा कोरोना स‌‌क्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्लाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बुद्ध आदर्श माविका क्वारेन्टाइनमा बसेकामध्ये बुद्धाशान्तिका एक जना, तीन जना ताप्लेजुङ र एक जना पाँचथरको रहेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका स्वास्थ्य अधिकृत जीवन चौलागाइले जानकारी दिए । पोजेटिभ हुनेहरुमा ताप्लेजुङका ४०, १८, १८ वर्षका तीन पुरुष, पाँचथरका २० वर्षिय पुरुष र बुद्धशान्ति वडा नम्बर ४ का ३० वर्षिय पुरुष रहेको उनले जनाए । उनीहरू भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको लखनऊबाट स्वदेश फर्किएका थिए । स्वदेश फर्किएका उनीहरूलाई बुद्ध आदर्शको क्वारेन्टाइनमा राखिएको र त्यहीबाट स्
पाख्रीवासमा क्वारेन्टाइन बनाउने नगरपालिकालाई दिएनन
धनकुटा / कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन वढेसंगै हरेक स्थानिय तहले कम्तिमा १ सय वेडको क्वारेन्टाइन वनाउने भन्ने संघीयस सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर धनकुटाकोपाख्रिवासमा भने स्थानीयले क्वारेन्टाइन बनाउन अवरोध गरेकाछन् । पाख्रीवास नगरपालिका वडा नं.३ स्थित् कृषि क्याम्पसको निर्माणधिन २ वटा नयाँ भवनमा स्थानिय ३ नम्वर वडावासीसँग समन्वय नगरी नगरपालिकाले क्वारेन्टाईन वनाउन लागे पछि विवाद चर्किएको छ । नगरपालिकाले एकलौटी ढंगले स्थानियसँग समन्वय नगरी जवर्जस्ती क्वारेन्टाइन राख्न लागेको उनीहरुको आरोप छ । कृषि क्याम्पसको नयाँ भवनमा क्वारेन्टाइन राख्ने विषयमा ४ दिन यता पटक पटक नगरपालिका